Kubhejera pane dzakarukwa magedhi kugadzira zvipfeko zvevintage | Bezzia
Kubhejera pane dzakarukwa magedhi kuti vagadzire mazambiringa zvipfeko
Maria vazquez | 05/04/2021 18:00 | Chii chandinopfeka, Trends
Une mbatya dzakachengetwa pamba dzausina kupfeka mumakumi emakore here? Nguva yasvika yekutsvaga kuburikidza neizvi kuti upe avo mukana ruoko rwakarukwa makadhi kuti tese takave kana kana isu tese isu tiri vezera rakakodzera.
Kana iwe uine chero, iwe uri muhombe! Iwe unogona kugadzira vintage masitaera tenderera uye upe hupenyu hwechipiri kune iyo nguo. Iwe hausi kuchengetera zvinhu here? Usatombo kunetseka, hauzove nedambudziko rekuwana iyo yaunofarira mumaunganidzwa emafashoni azvino nekuti, sekuzivisa kwatakaita mwedzi mishoma yapfuura, ndeimwe yemaitiro emwaka.
Iine openwork, yakashongedzwa maruva, macheki macheki kana akasiyana matani. Iwo mazambiringa-akafuridzirwa akarukwa makadhigigans zviri kuitika mwaka uno. Uye seyakajairika, iwe unogona kuvawana mune muunganidzwa wemafemu emafashoni senge Zara, Mango kana Asos.
Mune mavara asina kwazvakarerekera kana akapfava pastel shades Vachave nebasa rakakura muzvipfeko zvemwaka uno wechirimo-zhizha 2021. Uye hazvizove zvakafanira kumanikidza kuvabatanidza mune izvi. Muchokwadi, kuvasanganisa nejean ndiyo inonyanya kufarirwa sarudzo pakati peva instagramers.
Peya yejean uye kadhi, iwe hauchade zvimwe ino chitubu. Kupedzisa kutaridzika naMary Janes kana T-Bar-chimiro chetsoka-chitsitsinho shangu uye dengu reruoko, sezvingaitwa naLouisa Durrell, iwe unozowana kutarisisa-kwakafemerwa kwemazambiringa kwakaringana kushandiswa kwezuva nezuva.
MaCardigans ane masere kana openwork mune asina kwakawanda matoni zvakare akakodzera kupfeka pamusoro pemadhirezi kana misoro ine maruva anodhinda. Uye kana iwe uchida manyore-makumi manomwe-akafuridzirwa masitayera, iwe uchafanirwa chete kuenda kune wakakwenenzverwa mini siketi uye inoenderana plaid cardigan, iwe ungashinga?
Kunze kwekukubatsira iwe kugadzira vintage anotaridzika mwaka uno, aya ma cardigans isina kora uye yakasungwa kumberi Vanozobatsira zvikuru kana zhizha rasvika. Tine chokwadi chekuti iwe uchawana zvakawanda kubva kwavari kupfuura zvaunofunga. Iwe unobatana netsika here?
Mifananidzo - @juliesfi, @maralafontan, @lolo_bravoo, @chloecleroux, @elliiallii, jane_mcfarland, @mirenalos, @audreyrivet, @mariellehaon
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Kubhejera pane dzakarukwa magedhi kuti vagadzire mazambiringa zvipfeko
Macadamia mukaka wemukaka, mabhenefiti uye maitiro ekuigadzirira